Olee otú ewepụtụ Videos on VLC?
VLC na-enye gị oké ụzọ dezie gị video na mfe ngwaọrụ. Ọ nwere ike ghara ịbụ a adịchaghị-edezi ngwá ọrụ ma ọ ndị kasị mkpa ọrụ nke ịcha / trimming a video. I nwekwara ike jikota ha ka ha ike a fun video.
Part 1: Olee bee video na VLC?
Part 2: Iji iwu akara asiak video
Part 3: Wondershare Video Convertor Ultimate
Otu nkezi ọrụ nwere ike mfe iji nke a video ọnwụ arụmọrụ iji chekwaa ma ọ bụ ịkọrọ ya. Nzọụkwụ ndị dị mfe ma dị mfe na-eso.
1. Mepee video na VLC ọkpụkpọ na-aga ele menu imeghe Advanced Controls.
2. Iji na ahụ ọkwa ịnyagharịa amalite nke n'ókè nke video na pịa ndekọ bọtịnụ.
3. Ugbu a-egwu video iru ọgwụgwụ akụkụ nke video. Ka ịkwụsị ndekọ, pịa ndekọ button ọzọ. Gị video ga-azọpụta na-an-kpọ ịzọpụta ọnọdụ maka VLC nke na-emekarị My Videos on Windows.
Usoro a bụ ihe fọrọ nke nta otu ihe ahụ ma windows na Mac kọmputa. Dị nnọọ mara ndabara Chekwa ọnọdụ nke vidiyo na Mac na windows ka ha dị iche.
Nkebi nke 2: Iji iwu akara asiak video
Iji Wụk Line bụ oké ụzọ asiak video na mfe ole na ole e. Usoro a bụ naanị maka na elu ọrụ dị ka ọ na-agụnye ezigbo nghọta nke iwu na video formats wdg Na usoro a, ị ga-eji iwu ozugbo imeghe VLC na-enweghị Ngwọta bụrụ na nke Mac. Ha na-ama dị na gị usoro. Ị pụrụ ịhụ ha n'okpuru omume na Windows ma ọ bụ chọọ 'enweghị Ngwọta' na Mac.
1. Launch iwu ozugbo n'ihi na windo na ọnụ maka Mac. Dị ka anyị na-eji iwu ozugbo ị ga-eduzi ihe omume na ọnọdụ ebe VLC arụnyere na gị usoro. Na-emekarị n'ihi na windo na ọ bụ C: \_ Mmemme faịlụ \_ VideoLan \_ vlc.exe na Mac, / ngwa / utilities.
2. Ka iche ị na-eji ọnụ. Mgbe i meghere VLC iji na-eso iwu bee a video.
Ihe dị mkpa na-achọpụta ebe a bụ na ị ga-tinye aha nke faịlụ na ị chọrọ bee n'ụzọ ziri ezi na "filename =", ị ga-ezipụta na mmalite oge na "amalite =" na-abanye na nkeji ruo ọgwụgwụ nke video.
Jide n'aka na ị maara ndị bụ isi nke iwu n'ihu na-eji usoro a.
Nkebi nke 3: Wondershare Video Convertor Ultimate
Gịnị ka ị na-eme ma ọ bụrụ na ị bụghị enwe ike iso mgbagwoju ntụziaka n'elu? Iwu akara interfaces bụ abụghị maka mmadụ nile na ike budata oge gị n'iyi. Ikekwe ị ga-adị ya mma ma na-eme ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ime ka a ọrụ na tech.
Ọ bụrụ na ị na-eji video na-adịghị na-akwado na VLC mgbe ahụ i nwere ike iji a ọzọ convertor n'ihi na video - dị ka Video convertor Ultimate. Ọ maara na-akwado fọrọ nke nta niile video formats na-anọgide na-upgrading na ọhụrụ. Ọ ga-zuru okè nnyemaaka maka VLC ọkpụkpọ mgbe edezi. Ọ atọghata ugboro 30 ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla ma ọ bụ Ntụgharị VLC onwe ya. Ọbụna na-arọ formats dị ka 4K format ụdị, a software na-agba ezigbo onye na-enye gị chọrọ n'ihi. Ugbu a, i nwere ike tọghata ị vidiyo site na iji Wondershare Video Ntụgharị kacha ma dezie ya na VLC ọkpụkpọ.
The Best VLC nnyemaaka, All-Na-Otu Video Ngwọta!
Dezie, Eme & hazie gị Videos File.
Otu ọkpụkpọ na-egwu niile na akakabarede ọrụ.
Atọghata faịlụ 30x ngwa ngwa karịa ndị ọzọ converters.
Tọghata na-ebu ọnụ niile Formats Gụnyere 4K / 3D.
Record nkwanye online vidiyo ma ọ bụ ihuenyo.
Ọkụ & hazie DVD na DVD menu ndebiri.
Gụgharia Your Media ka TV.
Top 5 Atụmatụ gị mkpa maara banyere Xbox 360 ihuenyo edekọ
Olee otú iji tọghata AVCHD Videos na breeki aka
Olee Otú M Pụrụ Bulite An MP3 ka YouTube?
Olee otú dezie RMVB / RM Video Files
Olee otú iji tọghata MOV (QuickTime) na 3GP
> Resource> Video> Olee otú iji ewepụtụ Videos on VLC?